Manchester United oo £28.6m ku raadinaysa Ramos - BBC Somali
Manchester United oo £28.6m ku raadinaysa Ramos
Image caption Sergio Ramos, ciyaaryahanka daafaca kaga dheela kooxda Real Madrid iyo xulka Spain
Manchester United ayaa waxa ay £28.6m ku dalbatay ciyaaryahanka daafaca kaga dheela kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos, waxaana la rumeysan yahay in ciyaaryahankan ka tirsan xulka Spain in uu doonayo in uu ka tago kooxdaasi.
Kooxdan lagu naaneyso Red Devils ayaa rumeysan in 29-jirkan uu doonayo in uu ka tago kooxda Real kaddib markii ay ku guuldareysteen in ay u kordhiyaan qandaraaskiisa oo dhacaya 2017-ka.
Ciyaaryahankan u dheela xulka Spain ayaa kooxda ku dheesha garoonka Bernabeu u saftay 445 kulan.
Tababaraha kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa doonaya in uu xoojiyo difaaciisa si uu kooxdiisa uga caawiyo in ay horumar ka sameyso kaalinta afraad ee ay xagaagii hore ku dhameysatay Horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga.
Ramos ayaa 2005-tii Real Madrid uga soo biiray kooxda Sevilla, waxa uuna kooxdaasi waqtiga dheeriga ah u dhaliyay goolkii barbaraha Ciyaartii kama dambeysta aheyd ee Koobka Horyaalada Yurub ee 2014-kii ee ay markii dambe kaga guulaysteen kooxda Atletico Madrid.
Ciyaaryahankan ayaa xulkiisa Spain waxa uu u saftay 128 kulan, waxa uuna ka mid ahaa ciyaaryahanadii ay Spain ku tashanaysay markii ay ku guulaysanaysay koobabkii Euro 2008, Euro 2012 iyo Koobkii Adduunka ee 2010-kii.
Kooxda ku dheesha garoonka Old Trafford ayaa sidoo kale lala xiriiriyay 25-jirka khadka dhexe kaga dheela kooxda Southampton ee Morgan Schneiderlin.
Tababaraha kooxdan lagu naanayso Saints-ka Ronald Koeman ayaa sheegay in uu shaki ka qabo mustaqbalka ciyaaryahankan u dhashay waddanka Faransiiska ee kooxdiisa, hasayeeshee waxa uu intaa ku daray in aanay weli rabitaan rasmi ah ka helin kooxda Manchester United.